SEO-Rankings ho an'ny fanavaozana ny tranonkala beibehalten - Semalt Expert
Ny fanavaozana ny tranonkala iray ary ny tanjon'izy ireo, mitazona ny SEO-Rankings, dia ny fahombiazan'ny tetik'asa manan-danja, ny mpanjifa mahay sy ny faharetana. Noho ny tsy fahampian'ny asa dia mitranga amin'izao fotoana izao ny mpividy, ny mpanjifa maimaim-poana, ary ny vohikala tranonkala.
Misy toro-hevitra 9 tena tsara, avy amin'i Max Bell, ny Customer Success Manager von Semalt Digital Services, natao hampianarana mba hahafahanao mitazona ny SEO-Rankings amin'ny fanavaozana ny tranokala.
Tipp # 1 Redesign on a separate domain
Ny asa ho an'ny Live Website dia mety ho rava ho anao sy ho an'ny mpanjifa anao - inhabit logo creator. Ny fifandraisana dia mety tsy mety raha tsy tokony ho izy, dia mitarika ny mpanjifa tsy sasatra. Ny tsara indrindra mba hiverenana dia ny manangana andrim-panjakana hafa ho an'ny tranokalanao vaovao sy miasa mandra-pahatonga anao ho vonona hiaina hiaina ary hampiarahana amin'ny original. Ity no lalana tena lavitra indrindra mba hiasa amin'ny tranonkala iray vaovao. Misy ihany koa ireo hafa izay mieritreritra fa mora ny miala amin'ny tranonkala ary ny fanovana natao dia tsara kokoa. Ity lalana ity dia tsy mety tsara, satria tsy lazaina hoe ny tranonkala tsy maintsy ilainao mba handao ny mpanjifa ao amin'ny kälte.
Dramatische Änderungen an einer Website sind möglicherweise nicht die beste Schritt auf Ihrer Seite. Fifandraisana tsara dia tsara. Ny olon-tiany, izay fantatr'izy ireo. Ianao manantena, fa fantatrao. Achten Sie darauf, Elemente Ihrer alten Website bei der Neugestaltung Ihrer neuen zu halten. Mamolavola tranonkala iray miaraka amin'ny mpilalao iray, alohan'ny hanombohana ny asa, ary ampiasao azy ireo amin'ny crawlen eo amin'ny tranonkala vaovao mba ahafahana manatsara ny fampisehoana ny tranokalan'ireo tranokala roa ireo.
Ny tranokalan'ny tranokalan'ny Internet dia tena manan-danja ary zava-dehibe ny fiarovana azy, alohan'ny hanombohana ny asa, satria raha very ianao dia ho sarotra raha tsy afaka tsy ho afaka hitazona azy. Tsy maintsy mitazona ny takelaka fikirakirana ny tranonkala izay nanananareo, ary mamolavola 301 redirection, mba hahafahan'ireo mpikaroka manoratra sy manoratra vaovao vaovao. Ny fialan-tsiny dia ny fomba fanao mahazatra mba handravana ny famaranana. Hikirakira ny takelaka iray amin'ny alàlan'ny Textdatei .
Tip 4: Manomeza URL iray ho an'ny tranonkala noforonina.
Manana URL templa ho an'ny fanavaozana ny tranokala noforoninao ianao. Alefaso ny tranokala taloha amin'ity URL ity. Ireo fanovana rehetra tokony atao dia tokony atao. Tsy tokony havoaka ity URL ity raha toa ka tsy mitady hevitra any amin'ny SERPs ny Suchmaschinen. Rehefa vita avokoa ny vaovao rehetra dia alefaso ny domains ary mialà sasatra.
Ireo famerenana ireo dia mitebiteby maro amin'ny aretina mahazo anao sy ny mpanjifanao. Miteny koa ny Suchmaschinen, raha sendra misy ny Organic Transport sy ny asanao. Manampy, mitandrema fa ny zava-drehetra dia toy ny tokony ho izy, ary ny fifandraisana araka izay mahomby. Azonao atao ny mamorona ny pejy rehetra ho an'ny pejy rehetra, izay mamaky azy io amin'ny 301, ary indrindra ireo pejy misy ny Backlinks.
Tsy dia mahasosotra loatra ho an'ny mpanjifany loatra fa tsy afaka mahazo ny vaovao ilaina amin'ny pejy iray. Ny pejy 404 misy ny hafatra marina dia afaka maneho azy ireo amin'ny làlana marina. Afaka miditra ao amin'ny Suchfeld ianao mba hanampy azy ireo. Amin'ny alalan'ny fampiasana 404 pejy, ny Searchmaschinen dia afaka manondro ny vaovao sy ny vaovao tianao marina
Tipp # 7 Aza adino ny Backlinks
Backlinks dia sarotra ny mamolavola sy manamboatra taona maro mba hiorina amin'ny fifandraisana amin'ny olon-kafa mpiasa serivisy hafa. Ianao dia tsy zavatra izay te-hahatsiaro anao mora na mora te handray. Tsy maintsy manangona ny antontan'isa rehetra azonao jerena ireo backlinks izay azonao, ary avy eo dia hahita ny lalana mankany amin'ny tranokalanao vaovao..Ny tena làlana tokony hatao dia ny hanomezan'ny hafa ny mpizahatany amin'ny tranonkala vaovao sy ny fangatahan'izy ireo hanova ny lasa. Raha toa ka tsy mahomby dia tsy maintsy mamerina redirects ho an'ny pejy iray miaraka amin'ny backlink.
Tipp # 8 Verify Your Work
Tsy nisy olona niteny na inona na inona, ny fanavaozana ny tranonkala dia tsotra, ary izany dia hita fa tsotra! Rehefa avy nilaza ny zavatra rehetra, dia tokony ho azo antoka fa tsara daholo. Ny sary dia mila verkleinert ary voafintina tsara. Robots.txt dia tsy maintsy miorina tsara, na ny Suchmaschinencrawler aza tsy afaka mamaky azy. Hikirakira ny rohy diso sy hamaha azy. Tsidiho ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny Google Webmaster. Amin'ny alalan'ny fandefasana an'i Google dia afaka mahita ianao raha mety ny mifandray amin'ny tranokalanao vaovao. Aza adino ny manokatra indray ny tranokalanao vaovao momba ny fampidirana any amin'ny Google amin'ny Google.
Tipp # 9 Fanaraha-maso ny fampiharana mivantana
Tsy mbola vita ny asa, rehefa lasa ilay tranonkala vaovao. Tsy maintsy mbola mila manamarina ny voalazan'ny fanonganam-panjakana. Ireo antontan'isa ireo dia maneho ny fihetsiky ny olona amin'ny tranonkala vaovao. Ny halavirana avo lenta dia midika fa ny olona ao amin'ny tranokalan'ny vaovao dia tsy dia afa-po tanteraka.
Ny faharetan'ny fotoana fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny tranokalao vaovao dia 180 andro. Amin'ny fotoana rehetra dia tsy tokony hamela ny alimanakao nomenao anao. Tsy maintsy mandroso ny fanontanianao, ary koa ny 301-Weiterleitungen, ny olona mandefa ny tranokalanao vaovao. Ny fanovana dia tsy mora, fa raha toa ka manaraka ireo dingana ireo ianao, dia ho voavaha ny fahasarotanao, amin'ny fahasahiranana.